Akukade kudlule, ososayensi bathi, ukwelapha ukuleleka ngezidakamizwa - lokhu kulimaza umzimba wakho kuphela. Ukusebenzisa lezi zidakamizwa, umuntu ulele, ungena emzimbeni oseduze nombuso ukuze aphelelwe amandla futhi ekugcineni abe umlutha kulezi zidakamizwa. Sizokutshela ngezindlela eziyisithupha eziphumelela kakhulu zokunqoba ukubola.
Wonke umuntu uyazi ngokulala, kodwa bambalwa abazi ngezizathu zalo. Ukuqwashisa ngokuvamile kuvame ukusebenza kwezengqondo. Basebenzisa amandla amaningi namandla, ngokuvamile basebenza ngokugcwele, futhi ukulala kwabo kuphazanyiswa ngokuphuza indebe yekhofi. Kodwa ikhofi ayinciphisi ukukhathala, kodwa ingajabula kuphela okwesikhashana, ukukhathala kukhula.
Embhedeni ongathandeki, umuntu ulele kabi futhi akakwazi ukuthola indawo ekhululekile, lokhu kungaba imbangela yokungalali. Umbuzo ungaxazululwa uma usebenzisa imilenze yamathambo nama-mattress. Ukulala kubo akusizuzisi nje kuphela impilo, kodwa futhi kukhululekile.
Ukuqwashisa kuthinta abantu abanezinhlobo ezithile zokukhungatheka kwesimiso sezinzwa noma ukukhathala. Kungabonakala kubantu abahlukunyezwa umoya, ukuhlaselwa ukukhwehlela, ukuphazamiseka kwe-circulatory.
Izinyathelo zokulwa nokulele
Kubalulekile ukuhambisana nokulala. Kusihlwa kuhamba emoyeni omusha ngaphambi kokulala ubuthongo ngokuqwashisa. Kusukela emsebenzini wengqondo ngaphambi kokulala, udinga ukwenqaba. Isidlo kufanele senziwe masinyane hhayi ngokuqinile, hhayi ngaphambi kokuphupha. Ngaphambi kokulala, udinga ukugeza okufudumele. 200 ml ubisi kuzokusiza ulale futhi ulale ngokuthula.
Ikhambi labantu lokulala nokushona i-lavender amafutha. Ngaphambi kokulala, kudingeka udle ishukela ngamaconsi amabili e-lavender noma u-smear ngamafutha e-whiskey lavender.
Izindlela eziyisithupha eziphumelelayo zokunqoba ukubola
1. Udinga ukulala emceleni ophansi ngakwesokunxele sakho noma esiswini sakho, lokhu kuzokusiza ukuthuthukisa umsebenzi wamathumba futhi kukusize ulele.
2. Ventilate ekamelweni ngaphambi kokulala. Ungadli itiye eliqinile noma utshwala ebusuku, kuphazamisa ubuthongo kuphela.
3. Imithwalo yemifino izosiza ngokuqwashisa, lokhu kuvela emaqabunga e-mint, hazel, laurel, fern, kanye namaqabunga e-oregano, i-geranium, ama-rose petals, ama-cones of hops, ama-pine izinaliti. Ungasebenzisa izitshalo ezinjalo ezahlukene. Gcwalisa ngemisamo, bese uyomisa ebhodini lokushisa eliphakathi. Ngaphansi komcamelo, ungabeka isikhwama sezinyosi, uzokuletha ngokushesha iphupho.
4. Amanzi okufudumala ngokuhlanganisa amafutha abalulekile - i-orange, i-chamomile, i-mint, umhluzi we-valerian, i-infusions yamakhambi aphunga - i-oregano, i-mint, i-calendula, izinaliti izosiza. Ngemuva kokugeza kwamagciwane, amafutha noma umhluzi, akudingeki ukuba usule ithawula, bese ulala.
5. Siza izidakamizwa zezinyosi, ama-cumin, imbewu ye-hemp, amajikijolo kanye namagxolo we-viburnum, i-valerian, i-infusions ezimpandeni zama-elderberry, ama-decoctions we-sage, ama-chamomile, ithanga elinamaju, i-hawthorn, ngaphambi kokulala.
6. Ukwenza igumbi elifanele ukulala, kudingeka ugweme umsindo, ususe izimbali ngamakha amahle, uphuzo olubukhali, ugweme amathoni abomvu.
Ungayithola kanjani enye ukunqoba ukulele?
Uma ukulala kungafiki kithi, lokho esingenzanga nje ukulala, futhi sicabangela izimvu, nezindlovu, futhi, ekugcineni, ziphonsa futhi ziphenduke kuze kube sekuseni. Manje, uma kwakukhona ikhambi eliphephile nelonke jikelele lokulala ubuthongo, kodwa, ngeshwa, lingakaqalwa, futhi amanye amaphilisi anomthelela ohlangothini. Ungaziphoqa ukuba ulale ezinye izindlela eziphumelelayo.
1. Ngezingubo zakho, susa izinkinga zakho zansuku zonke
Asilali futhi ngoba izinkathazo kanye nezinkathazo zethu zisenza sikwazi ukuphumula ngokuphelele. Udinga ukukhipha yonke imizwelo emibi kuwe, lokhu kuyimona, ukufutheka, intukuthelo. Njengoba isaga sithi, abantu abanobukhuni abaphuzi iphupho, ngakho gxila ezintweni ezijabulisayo, futhi ungakheli izinhlelo zokuphindiselela ebusuku.
2. Lalela umsindo womculo noma umculo kaMozart
Uma kuqhathaniswa neminye imisebenzi, izingoma zikaMozart ezinokuleleka zinomthelela wokwelapha. Benza kube lula ukwesaba, kugcizelela ukucindezelwa kwegazi. Futhi uma i-classic ingasebenzi kuwe, vele uvule umshayeli. Wena kuma-akhawunti angu-2 uzoklanywa yi-monotony ye-buzz yakhe.
3. Thola inja ngokwakho
Ukukhulula ukukhulumisana nokucindezeleka nomngane wakhe onamagundane amane. Futhi-ke uyayifuna noma cha, kodwa kufanele uphume emgwaqweni nenja kusihlwa. Ukuhamba ngaphambi kokulala kuthobisa ngokuphelele isimiso sezinzwa, futhi sikunikeza ukulala okude nokuzwakalayo.
4. Nikeza umzimba umthwalo ngokomzimba
Wena, eqinisweni, waphawula ukuthi ulokhu ugijima usuku lonke, futhi kusihlwa usuvele uwela ekukhathaleni. Kodwa akudingeki ukuba uzilethe isikhathi sonke sokukhathala, ngoba ugcwele ukulala, kodwa udinga ukuzinikela ngosuku lomsebenzi ojwayelekile ngokomzimba.
5. Asikho isidingo sokudla ebusuku
Ngemuva kwamahora angu-19 awudingi ukulayisha umzimba ngokudla. Futhi akukhuthazwa ukuba ulale ulambile, ngoba ukulala kuzophazanyisa futhi kusuka ekuguleni esiswini ngeke ukwazi ukulala isikhathi eside. Ngakho-ke, uma ungenalo isidlo esanele, udinga ukuphuza ingilazi yogurt noma udle yogurt.
6. Thatha ibhuku
Hlala ukhululekile ukukusiza ukuthi ugeze ngamanzi usawoti noma nge-pine extract. Ubude benkambiso kufanele kube ngamaminithi angu-20, begodu ukushisa kwamanzi akufanele kube ngaphezu kwama-37 degrees. Bese ulala futhi ubuthongo bakho buzophela.
7. Udinga ukulala ngesikhathi esifanayo
Uma uhambisana nombuso, umzimba wakho uzokwazisa ukuthi ngezinye izikhathi sekuyisikhathi sokulala. Ngokwesilinganiso, abantu abadala kudingeka balale okungenani amahora angu-8, futhi izingane zinconywa ukuba zilale okungenani amahora angu-10.
8. Thatha incwadi engathandeki
Kungabonisa ukulala okusheshayo, ezinye zingathinteka ngolimi lolimi lwangaphandle. Uma okuthile kubonakala kungathandeki kithi, ukucindezeleka kwegazi kuhamba phansi, kuvela i-yawn, kubonakala sengathi ukwehliswa kwemvelo kuyabonakala futhi ufuna ngempela ukulala.
9. Namathisela ezinyaweni ibhodlela ngamanzi afudumele noma isibambo sokushisa
Ukushisa kuyamlimaza. Ungaphinda futhi ngenye indlela, ukwenza lokhu, phakamisa ingubo futhi ubambe isikhathi okwesikhashana. Kudingekile ukuhlupheka, ngisho noma kwakukhona ukuthuthumela. Bese uzimboza ngengubo, uzozizwa uzwa umzwelo nokufudumala, futhi umbhede uzobonakala ukhululekile kakhulu.
10. Ngaphambi kokulala, uphuze ingilazi yobisi olufudumele
Kuzosiza ukuphumula nokuzola. Ngaphezu kwalokho, uju unamakhemikhali afanayo nalawo aqukethwe amaphilisi okulala. Kodwa uma othile enomdlavuza oju, khona-ke le ndlela ngeke isebenzele wena.
11. Yenza ucansi
Lezi zibonakaliso zamashumi eminyaka ezisetshenziswe abantu abaningi ngenxa yokungalali. Ngemva kokuphuma, iseli ngalinye lomzimba liphumula, futhi siphumule, futhi izinto eziphethwe yiphupho zikhishwa.
Manje siyazi ngezindlela eziyisithupha eziphumelela kakhulu zokunqoba lokhu kuleleka. Asikho isidingo sokukhathazeka ngokulala, lokhu okuhlangenwe nakho kungadala ukukhathala. Futhi uma kungekho amakhambi omuntu angakunqoba ukuleleka, udinga ukubona udokotela.
Indlela esheshayo yokwelapha umkhuhlane
Ukuhlolwa kwesisu ekhaya
Ungayandisa kanjani ukukhula kwakho
Imvubelo yeBrewer ngenhloso yokwelapha
Ungakwenza kanjani ukugcoba ngomunwe?
Kunokwelapha i-bronchitis ephazamisayo?
I-term mermaid ivela kuphi?
Kuyini ukudla okudingekayo ngomdlavuza webele?
Izimonyo zezingane ezisanda kuzalwa
I-tartar ene-trout ne-avocado
I-Pesto di Nochi
Inhlanhla empilweni yakho siqu
Inkukhu isaladi nge-asparagus, i-courgettes namakhowe
Izindlela zokusebenzisa amafutha abalulekile
Siyakuhalalisela ngoMnyaka Wezimvu evesini
Umswakama casserole utamatisi nobhontshisi
Ukudla okukhethekile kukaSofia Rotaru: Iyini imfihlakalo yobuhle nobusha obungapheliyo "umlimi" owaziwayo